အော်လန်ဒို ဘလွန်းမ်နှင့် ပြန်တွဲနေကြောင်း သတင်းများကို ကေတီပယ်ရီ ငြင်းဆို - Yangon Media Group
အော်လန်ဒို ဘလွန်းမ်နှင့် ပြန်တွဲနေကြောင်း သတင်းများကို ကေတီပယ်ရီ ငြင်းဆို
နယူးယောက်၊ ဧပြီ ၂၄
အော်လန်ဒိုဘလွန်းမ်နှင့် ပြန်တွဲနေကြောင်း သတင်းများကို ကေတီပယ်ရီက ငြင်းဆိုလိုက် ကြောင်း ဧပြီ ၂၄ ရက် Contactmusic သတင်းကဆိုသည်။ Dark Horse သီချင်းဖြင့် ကျော်ကြားခဲ့ သော အဆိုတော်ကေတီပယ်ရီသည် ဟောလိဝုဒ်မင်းသား အော်လန်ဒိုဘလွန်းမ်နှင့် လွန်ခဲ့ သောတစ်နှစ်ခန့်က လမ်းခွဲခဲ့သည်။ သို့သော် မကြာသေးမီလများအတွင်း ၎င်းတို့နှစ်ဦး ပြန်တွဲနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်ခဲ့သည်။
မိမိလမ်းခွဲခဲ့သောသူနှင့် ပြန်ချိန်းတွေ့ရန် ဖြစ်နိုင်ခြေ ရှိ၊ မရှိ အင်တာဗျူးတစ်ခုတွင် မေးမြန်းသော အခါ ကေတီပယ်ရီက”မရှိပါဘူး ကျွန်မ အဲဒီကိစ္စစဉ်းစား ပြီးပါပြီ။ ဆုံးဖြတ်ပြီးပါပြီ။ ပြီးတော့ ကျွန်မ အခု အင်မတန် ပျော်ရွှင်နေပါတယ်”ဟု ပြောကြားသည်။ သို့သော် သူ၏ဖြေကြားပုံအမူအရာမှာ အတည်အတံ့ ပုံစံမဟုတ်သဖြင့် စဉ်းစားစရာဖြစ်စေခဲ့သည်။ ကေတီပယ်ရီ သည်မကြာသေးမီရက်ပိုင်းကလည်း အော်လန်ဒိုဘလွန်းမ် ၏ဓာတ်ပုံကိုင်ထားသော ပုံကို အင်စတာဂရမ်လူမှုမီဒီယာ၌ တင်ခဲ့သည်။
သတင်းရင်းမြစ်တစ်ဦးကမူ ”သူတို့နှစ်ယောက်တိတ်တဆိတ် ပြန်တွဲနေပါတယ်။ နှစ်ယောက်စလုံး အလုပ်ရှုပ်နေကြတယ်ဆိုပေမယ့် သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းကို ဒုတိယအကြိမ် အခွင့်အရေးပေးဖို့ သေချာပြင်ဆင်နေကြပါတယ်”ဟု ပြောသည်။ ”နှစ်ဦးသဘောတူ လမ်းခွဲခဲ့ကြပေမယ့် လမ်းခွဲပြီဆိုတော့ လည်း ကေတီပယ်ရီတစ်ယောက် အတော်စိတ်ထိခိုက်ခဲ့ရပါတယ်” ဟုလည်း ၎င်းက ပြောသည်။
Rolling Stones အဖွဲ့အတွက် သီချင်းရေးနေဟု မစ်ဂျက်ဂါပြော
လုပ်ငန်းလိုင်စင် သက်တမ်းတိုးခြင်း အချိန်မီဆောင်ရွက်ကြရန်နှင့် နောက်ကျသက်တမ်းတိုးပါက ဒဏ်??
ကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့ ဇာတ်လမ်းမှာ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရတာကြောင့် ကိုယ့်ကာရိုက်တာကို အပြည့်အဝ ယံ?
စစ်မှုထမ်းရန် ခေါ်ခံရပါက ဆွန်ဟောင်မင်ကို စပါးအသင်း လက်လွှတ်ရနိုင်
ဗန်းမော်မြို့နယ်၌ စိုးရိမ်ရေမှတ်အောက် ဆက်လက် ကျဆင်းနေသော်လည်း ဗန်းမော်-မန္တလေး မဟာဗျူဟာ လမ်း၌ ခရီးသွားများ ကူးတို့ စက်လှေဖြင့်သာ သွားလာနေရ
ဂျူဗင်တပ်နောက်ခံလူ ကန်ဆယ်လိုအား ဒန်နီလိုဖြင့် မန်စီးတီးအလိုက်ပေးခေါ်ယူ